बाघको छाला ओढेको गधा र पौडेलविरुद्धको बेलुन | Mechikali Daily
बाघको छाला ओढेको गधा र पौडेलविरुद्धको बेलुन
Posted By: adminon: May 06, 2019 In: breaking, slideshow, बिचार, राजनीति, समाचार
पञ्चतन्त्रमा एउटा बाघको छाला ओढ्ने गधाको कथा पढ्न पाइन्छ । गाउँको एउटा छट्टु आफ्नो गधालाई अरुको खेतबारीमा चराउन कतैबाट एकथान बाघको छालाको जोहो गर्छ र त्यो छाला आढाएर गघालाई अरुको खेतमा बाली चर्न छोडीदिन्छ । बाली चरिरहेको गधालई बाघ ठानेर किसानहरु अचम्ममा पर्छन् । एकआपसमा खासखुस गर्छन्, आपसमा तर्कवितर्क गर्छन्, होइन अचम्म पो भयो त, विचित्र संसारमा घाँस खाने बाघ पनि जन्मेछ । यस्तो तर्कना गर्छन् विचरा सीधा किसानहरु उसलाई लखेट्ने र नजिकै जान भने डराउनछन् । बाघको छाला ओढेको गधाले दिनहुँ किसानहरुको खेतवारी रोजीरोजी चर्छ र एकदिन किसानकोखेतीमा चरिरहेको बेला अर्को गधा कराएको सुन्छ र ऊ पनि आफ्नो असली जात जनाउँदै ‘गर्घन राग’ छोड्छ । बल्ला किसानहरुको अगाडि बाघको छाला ओढेको गधाको असलीरुप खुल्छ । त्यसपछि धुर्तकीसान र त्यो गधाको भागाभाग हुन्छ ।
हो त्यस्तै कथा जस्तै अहिले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आठआना जग्गाको त्यान्द्रो देखाउँदै राटी सेक्ने पौडेलमाथि आक्रमण गर्ने र बद्नाम गर्न सकिन्छ कि भनेर न्वारनदेखिको बल लगाउँदै बाघको छाला ओढेका गधारुपि प्रवृत्ति देखा परेको छ । पहिलो कुरा त प्रचलन कानूनको प्रावधानअनुसार छोराले मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता, मठ र फिल्ड भिडाएर खरिद गरेको दोस्रो भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ को अनुसूची– २ अनुसार माया प्रजापतिले फारम भरेको र प्रमाणित भई मोहीको निस्सा प्राप्त गरी मोहीयानी हकबाट प्राप्त भएको जग्गा त्यो पनि छैठौँ व्यक्तिको रुपमा खरीद गरेको तस्रो प्रचलित कानूनअनुसार राजस्व तिरेको । यसरी खरीद गरेको जग्गाका सम्बन्धमा पुरै जग्गा हडपे जसरी चित्रित गर्ने दुश्प्रचार मात्र होइन, रहस्यको ढोका एकदिन खुल्नेछ, जसरी बाघको छाला आढेको गधारुपी पात्रको असली रुप देखियो ।
बद्नाम गर्ने नियतका साथ कपोकल्पित, भ्रामक र नियोजित ढंगले प्रचार गरिएको छ । जग्गा प्रकरणमा स्वयम पौडेलले सार्वजनिक रुपमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ । उता नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली, नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यस विषयमा धारणा व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ । जुन अभिव्यक्तिमा महासचिव पौडेलको बालुवाटार प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको र आठआना जग्गा खरिद प्रचलित कानूनअनुसार गरेको पुष्टि गरिएको छ । जग्गा खरिद गर्दा कसैले पनि सातपुस्ता खोजीनीति गर्दैन । जसरी पौडेलले पनि आवश्यक ठान्नुभएन । एउटा कुरा के हो भने यदि गलत नियतका साथ खरिद गरेको भए १५÷१५ सम्म त्यो जग्गा राख्नुहुन्थ्यो र बिचमै बेचिहाल्नुहुन्थ्यो नि त्यो जग्गा बिक्री नगर्नुले पनि नियत सफारहेको पुष्टि गर्दछ, त्यसैगरी पौडेलमाथि पदीय दुरुपयोगको गम्भीर आरोप लगाईएको छ, जुन सर्वथा गलत र निराधार छ । किनकि त्यसबेला पौडेल अहिले जस्तो शक्तिमा हुनुहुन्थेन । त्यसमाथि नत पार्टीको हाइकमाण्डमा, नत सरकारको मन्त्री, नत सांसद नत कुनै सार्वजनिक ओहोदामा त्यस्तो वेला कसरी पदीय दुरुपयोग हुन सक्छन् । २०७६ सालको चस्मा लगाएर २०६१ सालमा हेर्नु दृष्टिभ्रम मात्र जान्छ । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेलमाथिको आक्रमण सिंगो नेकपा ताछ्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा डिजाइन हुनसक्छ । लोकप्रियता हासिल गर्दै अघि बढेको नेकपाको सरकारलाई कमजोर र बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि कतिपयले दुश्प्रयास गरेका हुन सक्छन् ।
नेकपाका महासचिव तथा लोकप्रिय नेता विष्णुप्रसाद पौडेलका विरुद्धमा केही स्यालहुइँयाहरु चलेका छन् । कतिपय गधारुपीहरुले बाघको छाला ओढेर हुँकार गर्न खोज्दैछन् । नेकपकामाथि आक्रमण गर्नु अघि त्यसका हस्ती विष्णु पौडेललाई नै कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले स्यालहुइँयाहरु संगठित भएका छन् । पौडेललाई कमजोर बनाउन सकियो भने त्यसैमार्फत नेकपा र सरकारलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा केही शक्ति प्रयत्नरत छ । विकासको रोलमोडल बनेका नेता पौडेललाई यहीँ मेसोमा बदनाम गर्न पाइयो भने हिजो चुनाव हराएको बदला पनि लिन पाइने र आफ्ना बडेमानका नेताको कमजोरी पनि उतै तर्काउन पाइने छिर्के दाउमा विरोधीहरु लागेका छन् । हुँदै नभएका आरोपहरु एउटै नेताको थाल्पोमा खन्याउँदा पनि टसको मस किन हुँदैन भनेर स्यालहुइँया र पार्टीका धमिरेहरु रन्थनिएका छन् । जग्गा हड्पनै पर्ने थियो भने त्यत्तिका धेरै (११३ रोपनी) जग्गा छाडेर जम्मा आठ धूर किन लिन्थे ? अलिकति मगज पनि खियाउन नसक्नेहरुले अनेक हण्डर र ठक्करबाट स्पात भएको नेता विष्णु पौडेललाई चिमोट्न खोज्ने ? पौडेललाई मोहरा बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ठेकेदारहरुलाई उम्काउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येय पनि कतिपयको हुनसक्छ । तर, पौडेल यो प्रकरणमा कुनै दोषी छैनन् ।
विष्णु पौडेललाई कमजोर बनाउन सकियो भने त्यसैमार्फत नेकपा र सरकारलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने दाउ कतिपयको छ । विकासको रोलमोडल बनेका पौडेललाई यहीँ मेसोमा बदनाम गर्न पाइयो भने हिजो चुनाव हराएको बदला पनि लिन पाइने र पार्टीको खम्बा पनि कमजोर हुन्छ कि भन्ने शोंचमा स्याल हुइँयाहरु लागेका छन् । जनप्रिय र सबैका आदर्श नेताको बढ्दो लोकप्रियता, शालीन व्यक्तित्व, सरल र सहज बोली व्यवहार र सम्बन्ध, विकासप्रतिको समर्पण तथा विकासप्रमी नेता र जनमुखी कार्यशैलीका कारण देशैभरी पौडेलले कमाएको लोकप्रियताबाट भित्र बाहिरका शक्तिहरु त्रसित छन् ।
यसका लागि विभिन्न कोठामा बसेर समाचारको प्लटिङ गर्ने र नियोजित प्रचार गर्ने गरेपनि सत्यता एकदिन बाहिर आउनेछ । अहिले बाघको छाला आढाएर गधालाई किसानको खेतमा चर्न पठाएजस्तै नेकपा, सरकार र जनविरोधी तत्वहरुले विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरीरहेका छन् त्यसैको एउटा शृङ्खलाको रुपमा गत शनिबार रुपन्देहीमै एउटा नाटक मञ्चन भयो । जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरुको एउटा समूहले चारतारे झण्डा ओढेर नेकपा महासचिव तथा सांसद पौडेलका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको समाचार आएको छ । निर्वाचनमा पराजित भएको छटपट प्रष्टै झल्किने गरी दिएको अभिव्यक्ति भन्दा अर्थोक देखिँदैन । त्यस जिल्लाको सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहनुभएका पौडेलमाथि त्यस जिल्लामा विरोध गर्नु सार्वजनिक खपतका लागि सिवाय केही हुन सक्दैन । किनकि पौडेल निर्वाचित हुनु अघिको रुपन्देही र अहिलेको रुपन्देही जस्ले काँचुली नै फेरेको छ, त्यो हेरेमात्र पुग्छ । रुपन्देहीको तटबन्धनमा होस् वा सडक होस् विद्युतीकरणमा होस् वा आद्योगिकरणमा होस्, धारामा होस् वा नहरमा होस्, गाँउमा होस् वा नगरमा होस् जताततै कायापलट भएको छ । जस्को श्रेय साँसद पौडेल माथि जान्छ, जोप्रति रुपन्देहिवासी नतमस्तक देखिन्छन् । हो रुपन्देहीको विकास भएको देख्न नसक्नेहरुले, जनताको जीवनस्तर माथि उठेको मन नपराउनेले र रुपन्देही तथा रुपन्देहीवासी समृद्ध भएको हेर्न नचाहने छन् । हुनत यो बेला पौडेलमाथि धनुषवाण होइन, मिसाइल नै बर्षाइयो, मिसाइल त बर्षाइयो तर मिसाइलमा बारुद होइन भुस राखिएका कारण पड्कन सकेन ।
जे होस् पौडेलमाथि एउटा ग्राण्ड डिजाइनका साथ नियोजित र चरित्रहत्या गर्ने हिसाबले शृङ्खलाबद्ध ढंगबाट जुन दुश्प्रचार गरियो, त्यसले के संकेत गर्छ भने विष्णु पौडेललाई कमजोर बनाइयो भने रुपन्देही मात्र हाइन सिंगो देशको नेकपा कमजोर बनाउने सकिन्छ कि ? तर त्यो पञ्चतन्त्रको कथा जस्तै एकदिन गधा कराउनेछ, सबैको भागाभाग हुनेछ । अहिले संघीय राजधानी काठमाडौँतिर यो प्रसंगको नक्कली कुराहरु टिक्न नसकेपछि रुपन्देहीतिरका केही थान पात्रलाई बाघको छाला ओढाएर विष्णु पौडेलको तेजोवध गर्न सकिन्छ कि भनेर निशाना सोझ्याइएको छ तर त्यो फर्मूला पनि मिति सकिएको औषधी बन्ने कुरा पक्कापक्की नै छ । किनकि पौडेलविरुद्ध उडाइएको बेलुन सत्यतथ्य कुराको सियोले घोच्नासाथ हावा खुस्कीहाल्छ । गधालाई बाघको छाला ओढाएर चर्न पठाए पनि एकदिन गधाको असली रुप देखा पर्छ नै, त्यसैले धेरै कुरामा प्रतिक्रिया दिन जरुरी छैन । त्यसबेला बाघ बन्न खोज्ने गधा मात्र हाइन, बाघको छाला ओढाएर गधालाई बाघ बनाउन खोज्ने र त्यसैमा आफ्नो अफवाहको स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने धूर्त किसानको भागाभाग हुनेछ । यस्ता पात्रहरुलाई समयमै पहिचान गर्न जरुरी छ ।